Zinedine Zidane ny tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana
Home CLASSIC STARS Zinedine Zidane ny tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny legiona baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Zizou'. Ny Zinedine Zidane tantaran-tantaran'olon-tsy fantatra momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanazavana dia mitantara ny tantaram-piainan'i Zinedine Zidane talohan'ny nahafantarana azy, ny fiainam-pianakaviana ary ireo tranga tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony avokoa ny rehetra fa mpankafy vitsivitsy ihany no mihevitra ny tantaran'i Zinedine Zidane izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Tany am-piandohana
Zinedine Yazid Zidane dia teraka tamin'ny 23rd of June 1972 tany Marseille, Frantsa ho an'i Smaïl Zidane (ray) ary Malika (reny) na Alzeriana.
Zidane dia nihalehibe tao La Castellane, toeram-ponenana ao an-tranon'ny heloka bevava any Marseille, tanàna amoron-dranomasina any atsimon'i Frantsa. Ankoatry ny heloka bevava, ny tahan'ny tsy fananan'asa sy ny famonoan-tena dia nihanandrana be tamin'ny manodidina ny mpifindra monina.
Ny rainy, Smail Zidane dia niasa tamin'ny toeram-piantsenan'ny trano fivarotana iray alina, na dia tsy maintsy niaina tamim-pahatoniana aza ny fianakaviana-tsy ireo fito ireo dia afaka niara-nipetraka sy nihinana. Izany dia nitarika ny tanora Zizou nanamboatra fikatsahana ny fahantrana tao amin'ny fianakaviany.
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Start Career
Nampidirina tamin'ny lalao baolina kitra izy tamin'ny faha-dimy taonany niaraka tamin'ireo ankizy monina manodidina azy. Tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy fanantenana ho an'ny mpifindra monina Frantsay Afrikana tamin'ny lalao. Zizou no nametraka ny ohatra ho an'ny hafa hanaraka azy.
Ho an'ireo mpifindra monina mpifindra monina, baolina fanatanjahantena fotsiny ny baolina kitra mba handalovany fotoana. ho an'i Zizou tenany ihany, ny baolina dia nitady ny hampitsaharana ny fahantrana izay nanosika ny fianakaviany sy ny olon-tiany. Tsy nanam-potoana aloha izy vao nahatazana ny mason'ny fanamarihana ara-panatanjahantena. Noho izany ny fikatsahana ny fisoratana anarana ao amin'ny klioban'ny baolina kitra amin'ny zatovo dia nanjary nihanihany. Zizou dia voarakitra ao amin'ny klioban'ny football club Saint-Henri tamin'ny taona 1981.
Satria i Alzeriana mpifindra monina tokana tao amin'ny klioba, Zizou dia nametraka hatrany ny resaka momba ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fanesoana momba ny fiaviany avy amin'ny vadiny sy ny mpanohitra azy. Nihaino sofina taminy izy. Noraisiny ny fomba nandao ny klioba ho an'ny SO Septèmes-les-Vallons izay nilalao tao amin'ny 1983 ka hatramin'ny 1986. Hetsika iray hafa mankany Cannes avy amin'ny 1986. Izy no namarana ny asan'ny tanany tao 1989. Nanomboka ny asa maha-tanora azy ho 9 izy saingy nifindra tamin'ny anjara andraikitra 10.
Zidane Zatovovavy- Avy amin'ny tanora mankany amin'ny asa momba ny zatovo
Ireo sofina marenina ho an'ny fanavakavahana kanefa tsy naharitra ela taorian'ny nidirany tao amin'ny ekipa ambony ao Cannes. Noraisiny ny safidy hanohitra ireo izay nanararaotra azy. Izany dia nitarika ny famonoana rehefa nandany ny ankamaroan'ny seminera voalohany tamin'ny herinandro ambony izy hanadiovana ny adidiny ho sazy noho ny fanenjehana ireo mpilalao izay naneso ny toerana nalehany.
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Zinedine Zidane dia avy amin'ny fianakaviana manetry tena. Tsy toy ny olona ao an-tanàn-dehibe, ny ankamaroan'ny fianakaviana Zidane. Niaina fiainana feno hafanam-po izy ireo tamin'izany fotoana izany fa tsy toy ny olon-kafa izay nanao heloka bevava ary tsy an'asa.
Ny rainy, sary etsy ambany, dia mpiasan'ny tranombarotra taloha. Niala sasatra izy rehefa avy nanao ny baolina ny zanany lahy.
Zinedine Zidane ray-Smaïl Zidane
Ny Malika Zidane reniny, sary eto ambany, dia trano fonenana taloha. Nalàn'i Malika Zidane ihany koa rehefa nitaingina ny baoliny ny zanany lahy.
Zinedine Zidane reniny - Malika Zidane
RAHALAHY: Zinedine Zidane dia manana mpihaino 3 izay voalaza etsy ambany.
Zinedine Zidane Rahalahy
Madjid Zidane (ankavia), Farid Zidane (ambany ankavanana) ary Noureddine Zidane (ambony), dia tafaraka tamin'ny fianakaviana Zidane manontolo tamin'ny 7 May 2006 ho an'ny sangan'asan'i Zinedine tao amin'ny kianja Santiago Bernabeu. Ireo rahalahy telo ao amin'ny "Zizou" dia mandray anjara amin'ny fitantanana ny raharahany amin'ny maha mpilalao sy mpilalao.
anabaviny; Zinedine Zidane dia manana rahavavy tanora antsoina hoe Lila Zidane.
Zinedine Zidane rahavavy - Lila Zidane
Lila koa dia mandray anjara amin'ny fitantanana ny asa fitakiana Zidane. Izy no miandraikitra ny fitantanana ny zony.
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Relationship Life
Ny Zinedine Zidane Love Story dia manomboka eto. Tamin'ny taona 17 dia nihaona tamin'ny vadiny Véronique Fernández (born in Aveyron amin'ny teny Espaniola), raha nilalao tao Cannes tamin'ny vanim-potoanan'ny 1988-89. Manana izay antsoin'ny olona hoe True Love izy ireo.
Raha nahita ny fitiavana i Zinedine Zidane
Veronique Fernandez Lentisco dia mpandihy sy modely talohan'ny nahafantarana azy ho vadin'ny iray amin'ireo lehibe indrindra footballers amin'ny tantara! Izy dia mahafinaritra an'i Veronique Fernandez Lentisco manambady ho an'ny mpilalao baolina misotro ronono Zinedine Zidane. Nivady tao amin'ny 1994 izy ireo.
Zinedine Zidane tantaram-pitiavana miaraka amin'i Veronique Fernandez Lentisco
Ny vokatr'izy ireo dia nanomboka herintaona taty aoriana. Manan-janaka efatra izy ireo amin'ny fotoana anoratana. Enzo Alan Zidane Fernández dia teraka tamin'ny 24 March 1995, Luca Zinedine Zidane Fernández (teraka 13 May 1998), Theo Zidane Fernández (teraka 18 May 2002), ary Elyaz Zidane Fernández (teraka 26 Desambra 2005).
Zinedine Zidane Fiainam-pianakaviana - Ankizy
Ireo ankizilahy efatra avy amin'ny Zidane nandalo ny Akademia Real Madrid. Ny zanakalahy voalohany, i Enzo dia mpilalao midi-pandrefesana ary i Luca kosa mpiambina fiara. Theo sy Elyaz koa dia mpilatsaka an-tanety.
Veronique sy Zinedine dia niara-niasa tamin'ny alalan'ny matevina sy matevina noho ny tamin'ny taona 20 nanisa. Nandritra ny taonany dia nanomboka very ny volony teo amin'ny lohany. Hoy izy tamin'izany fotoana izany: "Tia ahy ny vadiko, noho izany dia tsy olana izany"
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Ny zavatra tsaroany
Zinedine Zidane Facts - Ny zavatra tsaroany
Zidane dia mety ho toy ny iray amin'ireo olona tony indrindra eto an-tany, fa lavitra ny fahamarinana izany. Notoraham-po tamin'ny hafetseny mafana izy-zavatra izay, araka ny filazan'ny sasany, dia nandany medaly hafa ho an'ny mpandresy tamin'ny Mondialy hafa.
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Ny Red Card Service Community
Inona no mitranga rehefa mahazo karatra mena ianao ao amin'ny lalao farany amin'ny asa nataonao raha tsy afaka manompo ilay fampiatoana ianao satria tsy mpilalao intsony ary tsy hilalao mihitsy amin'izay? Manompo amin'ny fiarahamonina ianao. Izany no nitranga tamin'i ZIzou.
Zinedine Zidane Facts - Asa Fanompoana
Taorian'ny nahazoany karatra mena ho an'ny marika Marco Materazzi 'Zizou', dia tsy maintsy nanao asa fanompoana tamin'ny fiarahamonina izy hatramin'ny nandraisany ny fisotroan-drononony. Na dia tsy navoaka aza ny antsipirihan'ny tolotra fiarahamonina dia notaterina fa hanompo azy ao anatin'ny fihetsiketsehana FIFA amin'ny maha-olona. Midika izany fa mety ho nanafotra ny lalana izy na nanadio ny toeram-pisakafoanana, iza no mahalala?
Fa ny zavatra fantatsika dia ny hoe raha mahavita mena ianao amin'ny lalao farany amin'ny asa ratsy ataonao, dia azonao antoka fa tsy hivoaka ny helo amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola fotsiny.
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Red Card Record
Nanohy ny teboka voalaza teo momba ny fihetsika tsy misy dikany, Zidane dia manana rakitsoratra hafa amin'ny anarany-zavatra izay tsy tiany ho azony.
Raha mbola nilalao tamin'ny lalao fiadiana ny amboara eran-tany faharoa tamin'ny Arabia Saodita tao 1998 izy, ny Frantsay-Alzeriana dia naneho ny iray hafa amin'ny fehiny raha nibitsibitsika tamin'ny mpilalao Saodiana Fuad Anwar. Tsy dia noeritreretina loatra raha namoaka karatra mena henjana ny hetsik'i Zidane ny mpitsara, ka nahafahany nandefa ny mpilalao frantsay voalohany izy taorian'ny nahazoany karatra mena tamin'ny lalao mondialy.
Zinedine Zidane Facts - Tantara Maitso Ratsy
Farany dia nanandrana izany izy satria ny tanjony roa tamin'ilay fifanintsanana dia nanome an'i France ny tariky ny Tompondaka erantany voalohany.
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Fiara voalohany
Zinedine Zidane no nanao ny lahateniny ho an'i Cannes tamin'ny taona 16. Ny filohan'ny klioba dia tia ny satroboninahitry ny satroboninahitra izay nampanantenainy azy fiara ho fanomezana rehefa nahazo ny tanjony voalohany tao amin'ny klioba izy. Ary tsy maintsy niandry roa taona izy mba haninjitra ny tànany amin'ny fiara vaovao iray.
Tamin'ny 10th of February 1991, dia nahatratra ny tanjony voalohany tamin'ny fifaninanana nifanaovany tamin'i Nantes izy tamin'ny lalao iray izay nandresen'ny Cannes tamin'ny tanjona 2 ho an'ny 1.
Izy io no voalohany tamin'ireo tanjona marobe notohiziny mba hikarakarana ny asany. Mety tsy hanana tanjona marobe izay mety hitranga amin'ny mpilalao baolina miditra miditra izy. Na dia izany aza dia misy ny filazana fa nankahala ny maha-ao anaty boaty ny mpifaninana izy ary tia fotsiny ny mamelona ireo mpitokona.
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Zava-dehibe
Tsaroantsika ny Zidane ho azy headbutt tao amin'ny amboara erantany amin'ny World Cup 2006. Talohan'izany, dia tsaroany ny fahombiazany manoloana an'i Brezila nandritra ny fiadiana ny Amboara Eran-tany 1998.
Tao anatin'io lalao io, dia nahazo tanjona roa izy mba hitarika ny Les Blues amin'ny fandresena 3-0 manohitra an'i Brezila. Maro no mahafantatra izany. Na izany aza, ny maro tsy mahafantatra dia ny tanjona roa nosoratany - ary mbola mitoetra - ny tanjona tokana tokana azony tamin'ny firenena Amerikana tatsimo teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Tena zava-mahagaga izany satria ny asany dia niasa nandritra ny folo taona mahery ary nahitana fihaonana vitsivitsy tamin'ny ekipa latinina. Na izany aza, ireo tanjona roa ireo dia angamba ny tena manan-danja indrindra nataony.
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Maro no nanentana ny baolina kitra
Izy dia Idol ho an'ny mpilalao baolina Silamo rehetra izay nanomboka ny mahantra tany Eorôpa.
Ny asan'ny ekipany amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA 1998 dia nanentana ny fitiavan-tanindrazana Karim Benzema, N'Golo Kante, Tiemoue Bakayoko, Thomas Lemar, Antony Martial, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele ary Alexandar Lacazette handray ny lalao baolina kitra bebe kokoa mandritra ny fahatanorany.
Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Fifandirana ara-pinoana
Tsy misy afa-tsy ity sary eto ambany ity milaza fa mpivavaka silamo izy.
Ankoatr'izany, mametraka ny zanany rehetra kristiana Ny anarana indray dia mifanohitra amin'ny filazalazana azy ho "Silamo feno fanahy". Na dia izany aza, fantatra fa matetika izy no niteny ny Ayat al-Kursi talohan'ny lalao tsirairay fony izy mpilalao baolina kitra.
Desambra 25, 2017
Novambra 26, 2017